Imandarmedia.com.np: पैतृक सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था हट्ने, के हो इच्छापत्र ?
Main News, Newspaper » पैतृक सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था हट्ने, के हो इच्छापत्र ?
पैतृक सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था हट्ने, के हो इच्छापत्र ?
पैतृक सम्पत्तिमा सन्ततिको निरपेक्ष हक अन्त्य गर्ने गरी प्रस्तावित इच्छापत्रको व्यवस्थाबाट अन्ततः सरकार पछाडि हटेको छ।
संसद्को विधायन समितिले प्रतिवेदन तयार पारी संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्ने सहमति राजनीतिक स्तरमा भएको हो। इच्छापत्रको व्यवस्था देवानीसंहिता पारित गरेको १८ वर्षपछि लागू हुने गरी प्रस्तावित थियो। यो खबर नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।